Saturday June 18, 2022 - 16:06:49
Shirkan oo ahaa mid looga hadlayey dhibaatada waxyaabaha qarxa ay ku hayaan ciidamada duullaanka ku jooga Soomaaliya ayaa waxaa magalada Muqdisho ku yeeshay Saraakiisha ugu sarreysa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS loogu yeero, hay'adda gaalada Qaramada Midoobay u qaabilsan la dagaalanka Qaraxyada, kuwa ka socda midowga Yurub iyo Sarakiil katirsan DFS.
Muddo 3 maalmood ah oo uu socday shirkan ayaa waxa diirada lagu saaray sidii loo yareyn lahaa khatarta Qaraxyada amaba looga hortagi lahaaa, waxana isugu yimid inta badan hay'adaha reer galbeedka ee ku sugan Soomaaliya.
Mar uu ka hadlayey gabagabada shirka Taliyaha Afrikaanta wuxuu sheegay in loo baahan yahay xal u helida qaaraxyada caqabadda ku ah howgalka ATMIS ee Soomaaliya isagoo ku baaqay dadaallo wadajir ah oo ay sameeyaan hay'adaha ay khuseeyso iyo bulshada maxalliga ah.
"Si loo yareeyo khatarta Qaraxyada waxa loo baahan yahay howlgallo militari oo ay ku jiraan maamulada Soomaaliya iyo la shaqeynta bulshooyinka si loo xoojiyo dowladnimada iyo taageerida dadaallada xasilinta," ayuu yiri taliyaha guud ee ciidamada ATMIS.
Dhankiisa Agaasimaha Wasaaradda Gaashaandhigga dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Siciid Samantar oo furitaanka Shirka ka hadlay ayaa carrabka ku dhuftay in ay dhibaato xooggan ku qabaan Qaraxyada isagoo hay'adaha reer galbeedka uga mahad celiyey isku dayada ay ku taban taabinayaa DF-ka ee ku aadan ka hortaga qaraxyada.